हिलोमापनी कमल फुल्छ भन्ने सोचले छाहारी शिक्षा सदनको स्थापना भएको हो :अनिल पराजुली – Contemporary News Portal From Nepal
हिलोमापनी कमल फुल्छ भन्ने सोचले छाहारी शिक्षा सदनको स्थापना भएको हो :अनिल पराजुली
प्रकाशित मिति: १३ आश्विन २०७३, बिहीबार १५:४३
२०६७ पुस ११ बाट निम्न आय स्तर भएका बालबालिकालाई लक्षित गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएको बिद्यालय हो छाहारी शिक्षा सदन । छाहारी क्लबकै छेउमा रहेर करिबन ५०० भन्दा बढी बालबालिकालाई न्यून शुल्कमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेको छहारी शिक्षा सदनका संस्थापक प्रधानाध्यापक हुन अनिल पराजुली । निकै आर्थिक एवम विभिन्न संकटबाट पाठ सिक्दै जोरपाटीको उदाउँदो स्कुल बनाउन सफल भएका पराजुली २०५६ सालदेखि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेस गरेका हुन ।शैक्षिक मात्र नभएर बिभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गरेर विद्यार्थीलाई असल नागारिक बन्न अभिप्रेरित गरिरहेका अनिल पराजुलीसंग आशाका किरणका सुदर्शन बजगाईले लिएको कुराकानीको संपादित अंश :
आराम हुनुन्छ ?
बिद्यालय संचालनमा ब्यस्त छु । परिक्षा चलिरहेको छु त्यसमा ब्यस्त छु ।
शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुको कारण ?
असल नागरिक उत्पादन गरेर समृद्धि एवम संपन्न नेपाल निर्माणमा योगदान दिन सक्छु जस्तो लागेर यो क्षेत्रमा लागें ।
छहारी शिक्षा सदनको बारेमा बताईदिनुस न ?
हिलोमापनि कमल फुल्छ भन्ने सोचले छाहारी शिक्षा सदनको स्थापना भएको हो । शिक्षा क्षेत्रमा प्रचलित ऐन कानुनमा रही निम्न आय भएका र मध्यम वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना भएको संस्था हो । घोकन्ते बिद्यालाई निरुत्साहित गर्दै बैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबले संचालन भएको शैक्षिक स शैक्षिक संस्थाको रुपमा म यस बिद्यालयलाई चिनाउन चाहान्छु ।
के के पाउँछन् विद्यार्थीले छाहारी शिक्षा सदनमा ?
संगित,नृत्य,विभिन्न खेल्कुद र स्काउट सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञबाट सिकाइने भएकाले विद्यार्थीले पढाईका अलावा धेरै अतिरिक्त क्रियाकलाप पाउँछन् छाहारी शिक्षा सदनमा ।
तपाइँको सबैभन्दा खुसीको क्षण ?
म बिहान जब बिहान बिद्यालय आउँछु बालबालिकाले नमस्कार र शुभप्रभात गुरु भन्दा सबै भन्दा बढी खुसी लाग्छ । साडे ५०० विद्यार्थीका अभिभावकको सम्मान र साथीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा लागेकोमा हौसला प्रदान गर्छन मन आनन्दित हुन्छ । एसएलसी पास भएर लड्डु र चकलेट लिएर म पास भएँ गुरु अब यो पढ्छु त्यो पड्छु भन्ने स्वर सुन्दा मनै शान्त भएर खुसीको सिमा रहँदैन ।
दशैं बिदामा के गर्ने योजना छ ?
त्यस्तो प्लान त बनाएको छैन म पिएचडीको स्टुडेन्ट भएका कारणले आफ्नै अध्यनमा समय दिने बिचार गरेको छु । बिषयको गहिराईमा गएर व्यापक तयारी गर्ने योजना छ ।
सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुमा बिजया दशमी र शुभ दिपावलीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु ।
१३ आश्विन २०७३, बिहीबार १५:४३ मा प्रकाशित